Koofiga Malabka Toomaatiga ah ee ugu Fiican 6 Madaxyada Dhalo Caaga ah/ Dhalada Buuxinta Makiinada Soo Saaraha iyo Warshada |Ipanda
Dhalo Caag ah oo Toos ah 6 Madaxa Mashiinka Buuxinta Dhalada Caaga ah
Mashiinkan inta badan waxaa loo isticmaalaa malabka,saacad, ketchup,Buuxinta maraqa basbaaska, dhalada qaabab kala duwan iyo cabbirro kala duwan ah ayaa la habeyn karaa, oo ku habboon dhammaan noocyada cabbirrada iyo qaababka.
Mashiinka buuxinta waxaa wada matoorka servo, saxsanaan ka badan oo ka xasilloon marka loo eego dhululubo, si fudud loo hagaajin karo.Qaadashada FESTO Jarmalka, Taiwan AirTac qaybaha pneumatic iyo qaybaha xakamaynta korontada ee Taiwan, waxqabadku waa mid deggan.Qaybaha lala xiriiray walxaha waxay ka samaysan yihiin316L bir aan lahayn.
1.Mashiin kasta oo gooni-gooni ah ayaa loo shaqeyn karaa si madaxbannaan oo isku xiran;
2. Xakamaynta PLC, taabashada hawlgalka dhalada, hawl fudud oo habboon;
3. Isticmaalka qaybaha korontada ee caanka ah ee caanka ah, waxqabadka iyo xasiloonida;
4. Xariiqda wax-soo-saarka tooska ah ayaa lagu dabaqi karaa soo saarista dhalooyin kala duwan iyadoo la beddelayo tiro yar oo qaybo ah, hagaajintuna waa mid fudud;
5. Marka loo eego baahida macaamiisha, habaynta wax soo saarka 2 madax, 4 madax, 6 madax, 8 madax, 10 madax iyo 12 madax;
6. Dhalooyinka caaga ah iyo dhalooyinka dhalada ah ayaa loo habeeyey si waafaqsan shuruudaha macaamiisha.
Shanghai Ipanda Intelligent Machinery Co. ltd waa soo saaraha xirfad leh ee dhammaan noocyada qalabka baakadaha.Waxaan bixinaa khad wax soo saar oo buuxa oo ay ku jiraan mashiinka quudinta dhalada, mashiinka buuxinta, mashiinka dhejiska, mashiinka calaamadaynta, mashiinka wax lagu duubo iyo qalabka caawinta macaamiisheena.
Hore: Dhalo Yaryar oo Dhalo Malab ah Buuxinta Mashiinada Mashiinada
Xiga: Waxsoosaarka Sare ee Tootka ah ee dareeraha ah ee Malabka Dhalada Dhalada Buuxinta Mashiinka Xirmooyinka
dhalada buuxinta mashiinka
mashiinka buuxinta saliidda cuntada Mashiinka buuxinta malabka oo toos ah Mishiinka buuxinta dareeraha tooska ah Mashiinka Buuxinta Saliida Mashiinka Buuxinta Tuubbada Bistoon mashiinka buuxinta malab